Yɛn Nyankopɔn a Ɔyɛ Kronkron: ‘Kronkron, Kronkron, Kronkron Ne Yehowa’ (Yesaia 6) | Bɛn
‘Kronkron, Kronkron, Kronkron Ne Yehowa’
1, 2. Anisoadehu bɛn na odiyifo Yesaia nyae, na dɛn na ɛkyerɛkyerɛ yɛn fa Yehowa ho?
NÁ EHU aka Yesaia wɔ ahude a na ɔrehwɛ—anisoadehu a efi Onyankopɔn hɔ, no ho. Na ɛte sɛ nea ɛyɛ paa ara! Akyiri yi Yesaia kyerɛwee sɛ ‘ohuu Yehowa’ ankasa sɛ ɔte N’ahengua a ɛkorɔn no so. Yehowa atade mmuano yuu no yɛɛ Yerusalem asɔrefie kɛse no ma.—Yesaia 6:1, 2.
2 Nea Yesaia tee no nso maa ehu kaa no—wɔtoo dwom denneennen maa asɔrefie no wosowee kosii ne fapem so. Serafim, ahonhom abɔde a wɔwɔ dibea a ɛkorɔn paa no na na wɔreto dwom no. Wɔde nokoro too dwom anuonyam so denneennen sɛ: “Kronkron, kronkron, kronkron ne asafo [Yehowa, NW]! N’anuonyam ahyɛ asase nyinaa ma.” (Yesaia 6:3, 4) Asɛmfua “kronkron” a wɔbɔɔ din mprɛnsa wɔ dwom no mu no ma ɛyɛɛ nea wosii so dua wɔ ɔkwan soronko so ma ɛfatae, efisɛ Yehowa kronkronyɛ nni ano. (Adiyisɛm 4:8) Wosi Yehowa kronkronyɛ so dua wɔ Bible mu nyinaa. Nkyekyɛm ɔhaha pii de nsɛmfua “kronkron” ne “kronkronyɛ” bata ne din ho.
3. Ɔkwan bɛn so na Yehowa kronkronyɛ ho nsusuwii a ɛmfata a nnipa pii anya no ama wɔadan afi Onyankopɔn ho mmom sen sɛ wɔbɛbɛn no?
3 Ɛnde, ɛda adi pefee sɛ nneɛma atitiriw a Yehowa pɛ sɛ yehu fa ne ho no mu biako ne sɛ ɔyɛ kronkron. Nanso, saa adwene yi mma nnipa pii ntumi mmɛn no nnɛ. Ebinom di mfomso de kronkronyɛ toto bu a obi bu ne ho treneeni anaa bu a obu ne ho sɛ ne ho tew dodo ho. Onyankopɔn kronkronyɛ no betumi abɔ nnipa a wobu wɔn ho abɔnefo koraa no hu asen sɛ wɔn ani begye ho. Ebia wɔbɛte nka sɛ wontumi mfata sɛ wɔbɛbɛn Onyankopɔn a ɔyɛ kronkron yi. Enti, nnipa pii twe wɔn ho fi Onyankopɔn ho esiane kronkron a ɔyɛ nti. Ɛyɛ awerɛhow, efisɛ nokwarem no, Onyankopɔn kronkronyɛ yɛ ade titiriw nti a ɛsɛ sɛ yɛbɛn no. Dɛn ntia? Ansa na yebebua saa asɛm no, ma yensusuw nea kronkronyɛ a ɛyɛ nokware kyerɛ ho nhwɛ.
Dɛn Ne Kronkronyɛ?
4, 5. (a) Kronkronyɛ kyerɛ dɛn, na dɛn na ɛnkyerɛ? (b) Akwan titiriw abien bɛn so na Yehowa ‘ayi ne ho asi nkyɛn’?
4 Kronkron a Onyankopɔn yɛ no nkyerɛ sɛ ogye ne ho di dodo, ɔyɛ ahantan, anaasɛ obu afoforo animtiaa. Mmom no, okyi su ahorow a ɛtete saa no. (Mmebusɛm 16:5; Yakobo 4:6) Enti, dɛn na asɛmfua “kronkron” no kyerɛ ankasa? Wɔ Hebri Bible mu no, wonyaa asɛmfua no fii asɛm a ɛkyerɛ “yi si nkyɛn” mu. Wɔ ɔsom mu no, “kronkron” fa biribi a woyi fi nneɛma a wɔtaa de di dwuma mu si nkyɛn, anaasɛ ade a wobu no sɛ ɛyɛ kronn, ho. Kronkronyɛ nso twe adwene si ahotew ne kronnyɛ so kɛse. Ɔkwan bɛn so na asɛmfua yi fa Yehowa ho? So ɛkyerɛ sɛ ‘wayi ne ho asi nkyɛn,’ kyerɛ sɛ, watwe ne ho afi yɛn nnipa a yɛnyɛ pɛ ho koraa?
5 Ɛnte saa koraa. Sɛ́ “Israel kronkronni” no, Yehowa kaa ne ho asɛm sɛ ‘ɔwɔ ne nkurɔfo mu,’ ɛwom sɛ na wɔyɛ abɔnefo de. (Yesaia 12:6; Hosea 11:9) Enti ne kronkronyɛ no mma yɛne ne ntam kwan nware. Ɛnde, ɔkwan bɛn so na ‘wayi ne ho asi nkyɛn’? Wɔ akwan titiriw abien so. Nea edi kan no, wayi ne ho afi abɔde nyinaa ho a ɛkyerɛ sɛ ɔno nkutoo ne Ɔsorosoroni no. N’ahotew no yɛ nea edi mũ koraa na enni ano. (Dwom 40:5; 83:18) Nea ɛto so abien no, Yehowa ayi ne ho koraa afi nnebɔne nyinaa ho, na ɛno yɛ awerɛkyekye. Dɛn ntia?
6. Dɛn nti na yebetumi anya Yehowa ho a wayi afi bɔne mu koraa no mu awerɛkyekye?
6 Yɛte wiase bi a kronkronyɛ a ɛyɛ nokware ho yɛ na ankasa mu. Adesamma abusua ho biribiara a atew ne ho afi Onyankopɔn ho no ho agu fĩ wɔ ɔkwan bi so, na bɔne ne sintɔ wɔ ho. Ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa ko tia bɔne a ɛwɔ yɛn mu no. Na sɛ yɛamma yɛn ani anna hɔ a, bɔne betumi adi yɛn nyinaa so. (Romafo 7:15-25; 1 Korintofo 10:12) Entumi mma saa wɔ Yehowa fam. Esiane sɛ wayi ne ho afi nnebɔne nyinaa ho nti, bɔne ho nkekae ketewaa bi mpo remma ne ho da. Eyi san si adwene a yɛwɔ wɔ Yehowa ho sɛ Agya pa no so dua, efisɛ ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ obi a yebetumi de yɛn ho ato no so koraa. Esiane sɛ Yehowa nte sɛ honam fam agyanom abɔnefo pii no nti, ɔremmɛyɛ ɔtorofo, obi a ne bra asɛe, anaasɛ opira afoforo da. Ne kronkronyɛ nti, ontumi nyɛ biribi a ɛte saa da. Yehowa aka n’ankasa kronkronyɛ ho ntam bere ne bere mu, na ɛno ma ɛyɛ nea yebetumi de yɛn ho ato so koraa. (Amos 4:2) So ɛno mma yɛn awerɛhyem?
7. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ kronkronyɛ yɛ Yehowa nipasu titiriw?
7 Kronkronyɛ yɛ Yehowa nipasu titiriw. Dɛn na ɛkyerɛ? Sɛ yɛbɛyɛ mfatoho a: Susuw nsɛmfua “onipa” ne “sintɔ” ho hwɛ. Wuntumi nka nea edi kan no ho asɛm bere a w’adwene nkɔ akyiri de no so. Sintɔ adonnɔn yɛn na ɛka biribiara a yɛyɛ. Afei susuw nsɛmfua abien a ɛyɛ soronko ankasa ho—“Yehowa” ne “kronkron.” Kronkronyɛ adonnɔn Yehowa. Ne biribiara ho tew na ɛteɛ. Yentumi nhu sɛnea Yehowa te ankasa bere a yenhu asɛmfua a emu dɔ yi—“kronkron.”
‘Kronkron Ma Yehowa’
8, 9. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Yehowa boa nnipa a wɔnyɛ pɛ ma wɔbɛyɛ pɛ wɔ ɔkwan a anohyeto wom so?
8 Esiane sɛ kronkronyɛ yɛ Yehowa su nti, yebetumi aka ma afata sɛ ɔne kronkronyɛ nyinaa wura. Omfi pɛsɛmenkominya mu mfa su a ɛsom bo yi nsie; ɔde ma afoforo, na ofi ayamye mu na ɛde ma. Bere a Onyankopɔn nam ɔbɔfo bi so ne Mose kasae wɔ baabi a na nwura rehyew no, ɛhɔnom asase no bɛyɛɛ kronkron esiane sɛ nea na ɛrekɔ so no fa Yehowa ho nti!—Exodus 3:5.
9 Ɛdenam Yehowa mmoa so no, so nnipa a yɛnyɛ pɛ betumi ayɛ kronkron? Yiw, wɔ ɔkwan a ɛwɔ anohyeto so. Onyankopɔn hyɛɛ ne nkurɔfo Israel bɔ sɛ wɔbɛyɛ “ɔman kronkron.” (Exodus 19:6) Ɔde ɔsom a ɛyɛ kronkron na ɛho tew hyiraa saa man no. Enti kronkronyɛ pue Mose Mmara no mu mpɛn pii. Nokwarem no, na sika bona fam ɔsɔfopanyin no abotiri anim, baabi a sɛ hann tɔ so a, na obiara betumi ahu sɛ ɛrehyerɛn. Na wɔakyerɛw nsɛm yi wɔ so sɛ: “Kronkron ma Yehowa.” (Exodus 28:36, NW) Enti na ahotew ho gyinapɛn a ɛkorɔn no bɛma wɔn som ne wɔn asetra kwan nso ada nsow. Yehowa ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monyɛ kronkron, efisɛ me, [Yehowa, NW] mo Nyankopɔn, meyɛ kronkron.” (Leviticus 19:2) Bere tenten a Israelfo no de Onyankopɔn afotu bɔɔ wɔn bra koduu baabi a nnipa a wɔnyɛ pɛ betumi no, na wɔyɛ kronkron wɔ ɔkwan bi so.
10. Ɛdefa kronkronyɛ ho no, nsonsonoe bɛn na na ɛda tete Israel ne aman a na atwa wɔn ho ahyia no ntam?
10 Ná kronkronyɛ so dua a wosi yi ne amanaman a na wɔatwa Israel ho ahyia no som bɔ abira koraa. Ná saa abosonsom aman no som anyame a na wɔn biribiara yɛ atoro ne nnaadaa, anyame a wɔkaa wɔn ho asɛm sɛ wɔyɛ basabasa, wɔyɛ anibere, na wɔn bra asɛe. Na wɔn ho ntew biribiara mu. Anyame a ɛte saa no som maa nnipa ho guu fĩ. Enti, Yehowa bɔɔ n’asomfo kɔkɔ sɛ wɔntwe wɔn ho mfi abosonsomfo ne wɔn nneyɛe a ɛho ntew no ho.—Leviticus 18:24-28; 1 Ahene 11:1, 2.
11. Ɔkwan bɛn so na Yehowa soro ahyehyɛde no kronkronyɛ no da adi wɔ (a) abɔfo, (b) serafim, ne (d) Yesu ho?
11 Bere a Yehowa man a wapaw wɔn, tete Israel bɔɔ mmɔden paa wɔ kronkronyɛ ho no, Onyankopɔn soro ahyehyɛde no de ketewaa bi pɛ na wotumi daa no adi. Wɔka ahonhom abɔde ɔpepem pii a wɔsom Onyankopɔn nokware mu no ho asɛm sɛ “akronkronfo ɔpepem huhaa.” (Deuteronomium 33:2, NW; Yuda 14) Wɔda Onyankopɔn kronkronyɛ adi wɔ anuonyam a ɛhyerɛn na ɛho tew mu wɔ pɛyɛ mu. Na kae Serafim a Yesaia huu wɔn wɔ anisoadehu mu no. Wɔn dwom no mu nsɛm no da no adi sɛ saa ahonhom abɔde a wɔwɔ tumi yi di dwuma titiriw bi wɔ Yehowa kronkronyɛ a wɔbɛda no adi wɔ amansan nyinaa mu no mu. Nanso, honhom abɔde biako wɔ hɔ a ɔsen eyinom nyinaa—Onyankopɔn Ba a ɔwoo no koro no. Yesu na ɔda Yehowa kronkronyɛ a ɛsen biara no adi. Ɛfata sɛ wɔfrɛ no “Nyankopɔn kronkronni no.”—Yohane 6:68, 69.
Edin Kronkron, Honhom Kronkron
12, 13. (a) Dɛn nti na ɛfata sɛ wɔkaa Onyankopɔn din ho asɛm sɛ ɛyɛ kronkron? (b) Dɛn nti na ɛsɛ sɛ wɔtew Onyankopɔn din ho?
12 Na Onyankopɔn din ankasa nso ɛ? Sɛnea yehui wɔ Ti 1 no mu no, edin no nyɛ abodin anaa agyiraehyɛde bi kɛkɛ. Egyina hɔ ma Yehowa Nyankopɔn, na ɛfa ne su ahorow nyinaa ho. Enti, Bible ka kyerɛ yɛn sɛ ne din “yɛ kronkron.” (Yesaia 57:15) Mose Mmara no hyɛe sɛ wonkum obiara a ogu Onyankopɔn din ho fĩ. (Leviticus 24:16) Na hyɛ ade a Yesu de dii kan wɔ mpaebɔ mu no nsow: “Yɛn Agya a wowɔ soro, wo din ho ntew.” (Mateo 6:9) Sɛ́ wɔbɛtew biribi ho no kyerɛ sɛ wobeyi dekode no asi nkyɛn sɛ ade kronn na wɔadi no ni, na wɔagye atom sɛ ade kronkron. Ɛnde dɛn nti na ɛsɛ sɛ wɔtew biribi a ɛyɛ kronn koraa te sɛ Onyankopɔn ankasa din ho?
13 Wɔnam atorodi ne ntwiri so asɛe Onyankopɔn din kronkron no agu ho fĩ. Wɔ Eden no, Satan twaa atoro too Yehowa so kyerɛe sɛ Ɔyɛ Otumfoɔ a ɔnteɛ. (Genesis 3:1-5) Efi saa bere no, Satan—wiase a ɛho ntew yi sodifo no—ahwɛ sɛ ɔbɛma Onyankopɔn ho atoro a odii no atrɛw. (Yohane 8:44; 12:31; Adiyisɛm 12:9) Nyamesom ahorow ada Onyankopɔn adi sɛ obi a odi ne koko so asɛm, ɔmpɛ nnipa, anaa otirimɔdenfo. Wɔakyerɛ sɛ ogyina wɔn akyi wɔ wɔn akodi a wohwie mogya gu no mu. Mpɛn pii na wɔakyerɛ sɛ Onyankopɔn abɔde a ɛyɛ nwonwa no bae ara kwa, anaasɛ ɛnam adannandi so. Yiw, wɔaka Onyankopɔn din ho asɛmmɔne wɔ ɔkwan a enye koraa so. Ɛsɛ sɛ wɔtew ho; ɛsɛ sɛ wɔde anuonyam a ɛfata no san ma no. Yɛn ani gyina bere a wɔbɛtew ne din ho na wɔasan ne tumidi ho no, na ɛyɛ yɛn anigye sɛ yebenya kyɛfa bi wɔ saa atirimpɔw kɛse no mu.
14. Dɛn nti na wɔfrɛ Onyankopɔn honhom no kronkron, na dɛn nti na honhom kronkron ho abususɛm a wɔka yɛ aniberesɛm saa?
14 Yehowa ho biribi foforo wɔ hɔ a ɛkame ayɛ sɛ wɔfrɛ no kronkron bere nyinaa—ne honhom, anaa n’adeyɛ tumi. (Genesis 1:2) Yehowa de ne tumi a biribiara ntumi nni so yi na edi n’atirimpɔw ahorow ho dwuma. Biribiara a Onyankopɔn yɛ no, ɔyɛ no ɔkwan a ɛyɛ kronkron, kurennyenn, na ɛho tew so, enti ɛfata sɛ wɔfrɛ n’adeyɛ tumi no honhom kronkron anaa honhom a ɛho tew. (Luka 11:13; Romafo 1:4) Honhom kronkron ho abususɛm a wɔka, a nea ɛka ho bi ne sɛ obi hyɛ da yɛ ade tia Yehowa atirimpɔw ahorow no, yɛ bɔne a wɔmfa mfiri.—Marko 3:29.
Nea Enti a Yehowa Kronkronyɛ Twe Yɛn Bɛn No
15. Dɛn nti na osuro pa a yebenya yɛ Yehowa kronkronyɛ ho ade a ɛfata, na dɛn na ɛwɔ saa osuro no mu?
15 Enti, ɛnyɛ den sɛ wubehu nea enti a Bible de Onyankopɔn kronkronyɛ ne Onyankopɔn suro a ɛsɛ sɛ onipa nya bom ka asɛm no. Sɛ nhwɛso no, Dwom 99:3 kenkan sɛ: “Wobeyi wo din kɛse a ɛho yɛ hu no ayɛ,—ɔne kronkron.” Nanso, saa suro yi nyɛ suro bɔne. Mmom no, ɛyɛ osuro pa a emu dɔ, ɛyɛ obu a ɛkorɔn ankasa. Ɛfata sɛ yɛte nka saa, efisɛ Onyankopɔn kronkronyɛ no boro yɛn so koraa. Ɛho tew, na ɛwɔ anuonyam koraa. Nanso, ɛnsɛ sɛ yɛma ɛpam yɛn. Mmom no, Onyankopɔn kronkronyɛ ho adwempa a yebenya bɛma yɛabɛn no. Dɛn ntia?
Ɛsɛ sɛ yɛn ani gye kronnyɛ ho te sɛ ade a ɛyɛ fɛ ara pɛ
16. (a) Ɔkwan bɛn so na wɔde kronkronyɛ bata anuonyam ho? Ma nhwɛso. (b) Ɔkwan bɛn so na sɛnea wɔaka Yehowa ho asɛm wɔ anisoadehu mu no si ahotew, kurennyennyɛ, ne hann so dua?
16 Ade biako ne sɛ, Bible de anuonyam bata ahoɔfɛ ho. Wɔ Yesaia 63:15 NW no, wɔka ɔsoro ho asɛm sɛ Onyankopɔn “kronkronyɛ ne ahoɔfɛ trabea.” Yɛn ani gye ade a ɛyɛ fɛ ho. Sɛ nhwɛso no, hwɛ mfonini a ɛwɔ kratafa 33 no. So w’ani nnye saa tebea no ho? Dɛn na ɛma ɛyɛ wo fɛ kɛse? Hwɛ sɛnea nsu no ani yɛ kurennyenn no. Ɛbɛyɛ sɛ mframa no mpo mu tew, efisɛ ewim ayɛ bruu na ɛte sɛ nea hann no retwa yerɛwyerɛw. Afei, sɛ wɔsɛe saa tebea koro no—na nwura hyɛ asuten no ma, na wɔkyerɛkyerɛw nnua ne abotan no ho basaa, na mframa no mu bɔn wusiw—a, yɛn ani rennye ho bio; ɛbɛma yɛatwe yɛn ho afi hɔ. Yɛn ani taa gye nneɛma a ɛyɛ fɛ a ɛho tew, nea ɛyɛ kurennyenn, na ɛyɛ hann ho. Yebetumi de nsɛm koro yi ara akyerɛkyerɛ Yehowa kronkronyɛ mu. Ɛnyɛ nwonwa sɛ yɛn ani gye sɛnea wɔaka Yehowa ho asɛm wɔ anisoadehu mu no ho no! Ɛhyerɛn sɛ kanea, ɛhoa sɛ aboɔden abo, ɛharan sɛ ogya anaa fagude a ne bo yɛ den a wɔayiyi mu na ɛhyerɛn—saa na yɛn Nyankopɔn kronkron no anuonyam te.—Hesekiel 1:25-28; Adiyisɛm 4:2, 3.
17, 18. (a) Mfiase no, ɔkwan bɛn so na Yesaia anisoadehu no nyaa ne so tumi? (b) Ɔkwan bɛn so na Yehowa maa serafim bi kɔkyekyee Yesaia werɛ, na na serafim no adeyɛ no ho hia dɛn?
17 Nanso, sɛ yɛde yɛn ho toto Onyankopɔn ho a, so ɛsɛ sɛ kronkron a ɔyɛ no ma yɛte nka sɛ yɛnsɛ hwee? Nokwarem no, mmuae no yɛ yiw. Anyɛ yiye koraa no, yɛba fam sen Yehowa—na yɛba fam korakora. So ɛsɛ sɛ nim a yenim no saa no ma yɛtwe yɛn ho fi ne ho? Susuw nea Yesaia yɛe bere a ɔtee sɛ serafim no reka Yehowa kronkronyɛ ho asɛm no ho hwɛ. “Ɛnna mekae sɛ: Minnue, na mayera: na meyɛ onipa a m’ano ho ntew, na mete ɔman a wɔn ano ho ntew mu, efisɛ ɔhene, asafo [Yehowa, NW], na m’aniwa ahu no yi.” (Yesaia 6:5) Yiw, Yehowa kronkronyɛ a enni ano no maa Yesaia kaee sɛnea ɔyɛ ɔdebɔneyɛfo ne onipa a ɔnyɛ pɛ no. Mfiase no, asɛm no haw ɔbarima nokwafo no. Nanso, Yehowa annyaw no saa tebea no mu.
18 Serafim bi kyekyee odiyifo no werɛ ntɛm ara. Ɔkwan bɛn so? Honhom a ɔwɔ tumi no tu kɔɔ afɔremuka no ho kɔfaa ogyasramma kɔkaa Yesaia ano. Ebia eyi bɛyɛ sɛ ayayade asen awerɛkyekye. Nanso, kae sɛ na eyi yɛ anisoadehu, na emu nneɛma pii yɛ nsɛnkyerɛnne kwan so adeyɛ. Ná Yesaia, Yudani nokwafo no, nim yiye sɛ wɔbɔ afɔre wɔ asɔrefie hɔ da biara da de pata bɔne. Na serafim no fii ɔdɔ mu kaee odiyifo no sɛ ɛwom sɛ ɔnyɛ pɛ, ‘n’ano ho ntew’ de, nanso na obetumi abenya gyinabea pa wɔ Onyankopɔn anim. * Ná Yehowa wɔ ɔpɛ sɛ obebu onipa bɔne a ɔnyɛ pɛ sɛ onipa kronkron—anyɛ yiye koraa no, akosi baabi.—Yesaia 6:6, 7.
19. Ɛwom sɛ yɛnyɛ pɛ de, nanso ɔkwan bɛn so na yebetumi ayɛ kronkron akosi baabi?
19 Ɛte saa ara nnɛ. Afɔre ahorow a wɔbɔɔ no Yerusalem afɔremuka no so no yɛɛ biribi kɛse a na ɛrebɛba ho sunsuma kɛkɛ—afɔre biako a ɛyɛ pɛ a Yesu Kristo bɔɔ no afe 33 Y.B. mu no. (Hebrifo 9:11-14) Sɛ yenu yɛn ho wɔ yɛn bɔne ho nokwarem, teɛ yɛn kwammɔne, na yɛkyerɛ saa afɔrebɔ no mu gyidi a, wɔde yɛn bɔne firi yɛn. (1 Yohane 2:2) Yɛn nso yebetumi anya gyinabea a ɛho tew wɔ Onyankopɔn anim. Enti, ɔsomafo Petro kae yɛn sɛ: “Wɔakyerɛw sɛ: Monyɛ kronkron, efisɛ me, meyɛ kronkron.” (1 Petro 1:16) Hyɛ no nsow sɛ Yehowa anka sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ kronkron sɛ ɔno. Ɔnhwehwɛ biribi a yentumi nyɛ mfi yɛn hɔ da. (Dwom 103:13, 14) Mmom no, Yehowa ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ kronkron efisɛ ɔno yɛ kronkron. “Sɛ mma adɔfo” no, yɛpɛ sɛ yesuasua no kodu baabi a nnipa a yɛnyɛ pɛ betumi asuasua no akodu. (Efesofo 5:1) Enti kronkron a obi bɛyɛ yɛ ade a ɔkɔ so nya. Bere a yenyin wɔ honhom fam no, ‘yɛyɛ yɛn kronkronyɛ’ ho adwuma da biara da.—2 Korintofo 7:1.
20. (a) Dɛn nti na ɛho hia sɛ yɛbɛte ase sɛ yɛn ho betumi atew wɔ yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ kronkron no anim? (b) Bere a Yesaia hui sɛ wɔayi ne bɔne afi hɔ no, ɛkaa no dɛn?
20 Yehowa dɔ adetrenee ne ade a ɛyɛ kronkron. Ɔtan bɔne. (Habakuk 1:13) Nanso ɔntan yɛn. Bere tenten a yebu bɔne sɛnea obu no—yekyi bɔne, na yɛdɔ trenee—na yɛbɔ mmɔden sɛ yebedi Kristo Yesu anammɔn a ɛyɛ pɛ akyi no, Yehowa de yɛn bɔne firi yɛn. (Amos 5:15; 1 Petro 2:21) Sɛ yɛte ase sɛ yɛn ho betumi atew yɛn Nyankopɔn kronkron no anim a, nneɛma pii fi mu ba. Kae sɛ, mfiase no, Yehowa kronkronyɛ no kaee Yesaia sɛnea n’ankasa ho ntew no. Ɔteɛɛm sɛ: ‘Minnue!’ Nanso bere a ɔtee ase sɛ wɔayi n’amumɔyɛ afi hɔ no, ne tebea sesae. Bere a Yehowa kae sɛ ɔrepɛ obi asoma no ma wakɔyɛ adwuma bi no, Yesaia gyee so ntɛm ara, ɛwom mpo sɛ na onnim dekode a ɔrekɔyɛ de. Ɔteɛɛm sɛ: “Mini, soma me!”—Yesaia 6:5-8.
21. Dɛn na yebetumi agyina so anya ahotoso sɛ yebetumi ayɛ kronkron?
21 Wɔbɔɔ yɛn wɔ Onyankopɔn a ɔyɛ kronkron no suban so a yɛwɔ abrabɔ ho su pa ne tumi a yɛde susuw honhom fam nneɛma ho. (Genesis 1:26) Yɛn nyinaa betumi ayɛ kronkron. Sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛkɔ so ayɛ yɛn ho kronkron a, Yehowa ani begye ho sɛ ɔbɛboa yɛn. Ne yɛ mu no, yɛbɛbɛn yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ kronkron no kɛse. Afei nso, sɛ yɛresusuw Yehowa su ahorow ho wɔ ti ahorow bi a ɛwɔ yɛn anim ho a, yebehu sɛ nneɛma pii wɔ hɔ a ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛbɛn no!
^ nky. 18 Asɛm, ‘ano a ɛho ntew’ no fata efisɛ wɔ Bible mu no, wɔtaa de ano di dwuma sɛnkyerɛnne kwan so de gyina hɔ ma ɔkasa. Wɔ nnipa a yɛnyɛ pɛ nyinaa fam no, yebetumi ahwehwɛ mu ahu sɛ bɔne a yɛyɛ no mu pii fi sɛnea yɛkasa.—Mmebusɛm 10:19; Yakobo 3:2, 6.
Leviticus 19:1-18 Sɛ yɛn abrabɔ bɛyɛ kronkron a, dɛn ne nnyinasosɛm bi a ɛsɛ sɛ yɛde di dwuma?
Deuteronomium 23:9-14 Ɔkwan bɛn so na yɛn honam fam ahotew fa kronkronyɛ ho? Ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ eyi ka yɛn ntadehyɛ ne yɛn ahosiesie ne yɛn fie?
Romafo 6:12-23; 12:1-3 Bere a yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ kronkron no, ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ yebu bɔne ne wiase yi nkɛntɛnso ahorow no?
Hebrifo 12:12-17 Ɔkwan bɛn so na yebetumi ama yɛn ho atew, anaasɛ yɛayɛ kronkron?